Ogaden News Agency (ONA) – Markii xabsiga laga soo daayay Mandela ilaa maanta – taariikh kooban
Markii xabsiga laga soo daayay Mandela ilaa maanta – taariikh kooban
Waxaa Nelson Mandela laga soo daayay xabsiga maalin Axad ah oo bisha February ahayd 11 sanadkii1990. Nelson Mandela oo ahaa qofkii ugu cansanaa maxbuus siyaasad u xidhan, wuxuu ahaa 71 jir markii xabsiga uu ku xidhnaa 27ka sano laga soo daayay. Markii la weydiiyay mudaduu xabsiga ku jiray xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo kuwii soo xidhay wuxuu ku jawaabay; “.. Waxaan ogaaday inay waxwalba iga xayuubin karaan aan ka ahayn maskaxdayda iyo qalbigayga. Waxaanan go’aansaday in aanan labadaa u hibaynin.”
Intaan la soo daynin Mandela waxaa ka horeeyay wadahadal socday sanooyin badan oo isaga iyo xukuumadii midabtakoorka cadaanka ah ay wada galeen. Wadahadalkii ugu horeeyay wuxuu dhex maray Mandela iyo ninkii madaxda ka ahaa Sirdoonka Neil Barnard iyo ku-xigiinkiisa oo la socday. Wadahadalkaa wuxuu ahaa mid si qarsoodi ah ku socda oo looga gol lahaa in lagu ogaado waxyaaba midayn kara inay jiraan oo laga ambaqaado. Si wadahadaladaa qarsoodiga ah ay u socdaan ayuu Barnard xabsigii Mandela uu ku xidhnaa eeRobbenIslandka soo wareejiyay oo uu keenay Xabsiga Pollsmoor 1982kii. Wuxuu Mandela la keenay deegaan ka fiican midkii hore, waxayna isaga iyo ninkii madaxa sirdoonka Koonfur Afrika Mr. Bernard ay wadagaadheen hordhaca heshiiska loo yaqaano; wadahadla si loo wadahadlo (talks about talks).
Waqtigaa ayaa kor looga soo qaado heerkii qarsoodinimada ahaa oo la shaaciyay inuu socdo wadahadal. Markii wada-xaajoodkii isaga iyo qaybta sirdoonka ay heer fiican gaadheen oo waxyaaba badan la’isku afgartay ayaa meesha laga saaray sirdoonkii oo waxaa kala wareegay siyaasiyiintii iyo xisbigii talada hayay waqtigaa ee National Party. Markuu madaxweyne ka noqday dalka F.W. De Klerk 1989kii talaabadii ugu horeysay uu qaaday waxay ahayd inuu xayiraada ka qaado ururkii ANC iyo ururadii kalee xoriyadda dadka madow u doodi jiray, wuxuuna xabsiga ka soo daayo madaxdii ururka ANC ee siyaasadda u xidhnaa oo Mr. Nelson Mandela uu ugu dambeeyay 1990.
10 May 1994 ayaa Mandela loo doortay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyey ee K/Afrika ay muwaadiniinta oo idil ay si xor ah u soo doortaan. Doorashadaa ayaa lagu xasuustaa safafkii dhaadheeraa ee dadka madow ay markii ugu horeysay u soo galeen inay doortaan halyeygooda. Nelson Mandela wuxuu madaxweyne ahaa ilaa June 1999, isagoo ka fadhiistay hawlaha caamka ah. Inkastoo uu hawlihii siyaasadeed ka fadhiistay, hadana door muuqda ayuu ka qaatay Mandela siyaasadaha Afrika iyo inuu dhex-dhexaadin ka sameeyo meelaha dagaalada ay ka socdeen Afrika. Waxaa loo magacaabay 2000 inuu dhex-dhexaadiyo xoogagii ku dagaalamay Brundi halkaasoo uu nabad loo riyaaqay ka dhaliyay. Wuxuu u ololeeyay Mandela 2004tii in kubadda cagta aduunka lagu qabto Koonfur Afrika 2010, isagoo ku dooday in abaalmarin looga dhigo Koonfur Afrika 10 sano oo dimoqraadiyad dhab ah ay ka jirto. 15kii May 2004 wuxuu joogay magaalada Zurich markii lagu dhawaaqay inuu dalkiisa helay. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee ilmo ay indhihiisa ka hooraan, wuxuuna yidhi; 15 jir oo kale ayaan ahay maanta waana xasuus aan waligeed maskaxdeyda ka baxayn.
Wuxuu guursaday gabadha iyadana caanka ku noqotay ladagaalanka midab takoorka Winnie Mandela 1958, waxayna kala tageen 1996. Waxay u dhashay laba gabdhood. Wuxuu guursaday ka dib oo hadda la joogta afadii uu ka geeriyooday M/Weynihii Mozambique. 18 caruur ayuu awoow u yahay, wuxuuna hadda ku noolyahay meeshuu ku dhashay ee Qunu/Transkei.
Mandela waxaa la gudoonsiiyay in ka badan 250 isugu jira bilad iyo shahaada sharaf 40 sano gudahood. Waxaana ugu mudan Noble Peace Price-kii la gudoonsiiyay 1993. Nelson Mandela oo mar ku xukunaa inuu yahay argagaxiso ayaa maanta loo aqoonsan yahay inuu yahay nin nadiif ka ah siyaasad ahaan dhan walba. Mudadii uu madaxweynaha ahaa wuxuu jeexay asaaskii dimqoraadiyadda ee dadka kala midabka ah ee Koonfur Afrika ay ku wada noolaan lahayn iyadoo lagu kala baxayo sanduuqa doorashada.
Waxaa xusid mudan khudbadii uu Nelson Mandela bishii January 1962 ka jeediyey shirkii PAFMECA [Pan-African Freedom Movement of East and Central Africa] ee lagu qabtay magaalada Addis Ababa. Shirkan oo looga hadlayey xoriyad gaadhsiinta wadamadaAfricaee gumaysiga ku hadhay. Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; “Hadaan nahay Afrikaan waxaan ka soo horjeednaa nooc walba oo gumaysi ah.”
Madaxdii meesha isugu timid ee Afrikana wuxuu kula dardaarmay in aanay noqonin dad ku dhaga xukunka. Waxaabad moodaa inuu Madela sii ogaaa in Africaan walba in lagu dilo mooyaane aanu xukunka ka fuqi doonin.